Manao tsara ny Galapagos
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Ekoatera » Manao tsara ny Galapagos
Febroary 21, 2018
Mitombo isan-taona ny lazan'ny Nosy Galapagos dia toerana fialan-tsasatra fatratra. Izy io koa dia iray amin'ireo tontolo iainana malemy indrindra eto an-tany.
Ny fampiakarana an'ity nosy nosy amorontsirak'i Ekoatera ity dia azo oharina amin'ny gisa mametraka atody volamena. Nanjary nalaza loatra, hoy i Todd Smith, mpanorina sy filohan'ny AdventureSmith Explorations, izay midika fa mety hampidi-doza ny fitomboana amin'ny fizahan-tany sy ny fotodrafitrasa ho an'ity UNESCO World Heritage Site ity.
"Mety hiteraka fanimbana ireo tontolo iainana tena izy io izay manohana ny fiainana ny vorona, ny zavamaniry ary ny biby mivezivezy eto ny olona," hoy izy.
Ireto misy torolàlana momba ny fomba hanaovana ny marina amin'ny Galapagos.
- Mandehana amin'ny sambo kely (vahiny 12 ka hatramin'ny 100). Ny sambo kely dia eo afovoan'ny fialan-tsasatry ny Nosy Galapagos. Ny vorona sy ny bibidia vavolombelona amin'ny tontolo nosy tsy misy fanamby no alehan'ny sambo kely. Nahoana? Mandrakotra maherin'ny 3,000 kilaometatra toradroa miaraka amina nosy lehibe 13, ny nosin'i Galapagos dia lehibe kokoa noho ny noeritreretinao, ary maro ny tranonkala fitsidihana no azon'ny rano idirana. Ny fatoriana ambony sambo isan'alina dia ahafahana mijery fikarohana marobe satria tsy mila miverina miverina amin'ny trano onenana isan-kariva ianao rehefa avy mandehandeha an-tsambo.
Ny International Galápagos Tour Operators Association (IGTOA) dia nitatitra fa ny 100 isan-jaton'ny fitomboan'ny fizahan-tany Galapagos tao anatin'ny folo taona lasa dia avy amin'ny fizahan-tany an-tanety tamin'ny fotoana nandavan'ny fizahan-tany an-tsambo.
"Ny fitsangatsanganana an-tsambo any Galapagos dia fehezin'ny lalàna indrindra mba hampitomboana ny traikefan'ny vahiny sy hampihenana ny fiatraikany amin'ireo nosy," hoy i Smith, izay miasa ao amin'ny birao IGTOA ihany koa. Tsy voafehy firy izao ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany, ary tanjon'ny IGTOA, UNESCO ary vondrona fiarovana hafa hiambina ny fitomboan'ny nosy toy ny fizahan-tany any an-tsambo.
- Mijanona raha mbola azonao atao. Amin'ny famelana fotoana bebe kokoa any amin'ny nosy dia hihaona amin'ny bibidia be indrindra azo atao ianao ary hahita nosy maro kokoa. Manokana fotoana bebe kokoa hahalalana ny fahasamihafana ekolojika misimisy eo amin'ireo nosy dia manatsara ny traikefa ary manampy amin'ny fiarovana ny zotram-piaramanidina vitsy an'isa miditra sy mivoaka. Ny fifamoivoizana an-habakabaka miaraka amin'ny fitomboan'ny fandefasana entana dia roa amin'ireo ahiahy natolotry ny UNESCO tao amin'ny State of Conservation Report tamin'ny taona 2016 momba ny Nosy Galapagos satria ireo no mpiambina voalohany amin'ny fahatongavan'ireo karazany vaovao.
Ny fijanonana lava kokoa dia manampy amin'ny fanohanana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana miaraka amin'ny fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny fifandraisana misy dikany. "Manoro hevitra izahay farafahakeliny fitsangantsanganana 7 alina / 8 andro," hoy i Smith.
- Ataovy lohalaharana ny fiarovana. Alohan'ny diany Galapagos dia amporisihina ny olona hianatra momba ny fikambanana fiarovana sy ny filan'ny fiarahamonina ary hanome fotoana na vola ho azy ireo.
- Mikasa mialoha, ataovy tsara indray mandeha. Mandehana mankamin'ny toerana marefo toy ny tokony hataon'ny Galapagos indray mandeha, noho izany ataovy mahafinaritra ny fizotry ny fisafidianana amin'ity dia indray mandeha ity. "Miantsena mba hahita traikefa tsara indrindra ary mangataha torohevitra avy amin'ny manam-pahaizana izay nandeha nitety ny Nosy Galapagos," hoy i Smith nanoro hevitra. Ny famandrihana aloha dia manome safidy daty sy sambo bebe kokoa, miampy tolotra manokana toy ny fihenam-bidy alohan'ny vorona.
- Snorkel! “Raha tsy tafiditra ao anaty rano ianao dia tsy mahita ny antsasaky ny fiainana dia any Galapagos,” hoy i Smith. "Tsy misy tsy fahampian'ny trondro maro loko, fa ny fihaonana amin'ireo megafauna manaitaitra (liona an-dranomasina, antsantsa, taratra, sokatra), iguanana an-dranomasina toa prehistorika ary ny hany penguin monina any avaratry ny ekoatera no tena mampiavaka ny snorkeling Galapagos." Ny safidy snorkeling dia manomboka amin'ny rano lalina ka hatramin'ny snorkeling amoron-tsiraka mahafinaritra. Ho an'ireo izay tena tsy te-snorkel, azonao atao ny misafidy sambo misy sambo ambany vera. "Ny fifampiresahana amin'ny bibidia Galapagos sy ny fahitana azy ireo amin'ny akaiky toy izany dia miteraka fikolokoloana rehefa mifamatotra amin'ireo biby tsy misy tahotra ianao," hoy i Smith nanampy.
- Tadidio fa any Amerika atsimo ianao. Aza maika ny dia ary aza adino ny fikarohana kely momba ny zavatra hafa mety hatolotr'i Ekoatera na faritra akaiky hafa, toa ny Sacred Valley sy Machu Picchu, Peroa.
Prince Albert II mba hahatsiarovana ny nahaterahan'ny zanakavavin'i Monaco teraka tany Etazonia voalohany tany New Orleans
Singapore handray ny lanonam-panokafana mari-pankasitrahana 50 Bar tsara indrindra any Azia